I-Led Work Work Tripod, i-150 Watt Equivalent Led Bulb, uMenzi weLamphu yomsebenzi eTshayina
Inkcazo:Ulungelelanisi Umsebenzi wokuKhanya oKhanya,150 Watt Equivalent Led Bulb,Lampu lo msebenzi, Led Work Light,,
Home > Imveliso > Izibane zoMsebenzi > LED Work Light Lightodod
Iintlobo zeMveliso ze- LED Work Light Lightodod , singabakhiqizi abakhethiweyo baseChina, Ulungelelanisi Umsebenzi wokuKhanya oKhanya , 150 Watt Equivalent Led Bulb ababoneleli / umkhiqizo, iimveliso eziphezulu zexabiso eliphezulu ze-R & D kunye nokuvelisa, sinemisebenzi epheleleyo emva kokuthengisa kunye nenkxaso yobuchwepheshe. Khangela phambili ekusebenzisaneni kwakho!
I-120W I-bulb yokusebenzela i-bulb light fixtures  Qhagamshelana Ngoku
I-120W I-LED Yesikhashana Yomsebenzi Ukukhanya 5000K 15600Lm  Qhagamshelana Ngoku
120W I-Outdoor Stand Standing Led Work Work Tripod  Qhagamshelana Ngoku
I-80W Iimpawu zokuSebenzayo eziSebenzayo ezihamba kwiSiseko  Qhagamshelana Ngoku
I-100W I-Outdoor Tripod Work Worklights kunye ne-Stand  Qhagamshelana Ngoku
I-150W i-Tripod iLed Work Work Stand 5000K  Qhagamshelana Ngoku
I-120W I-bulb yokusebenzela i-bulb light fixtures <Ukwakhiwa koKwakha okuKhelelekileyo > : 120W I-bulb yokusebenzela i-bulb light fixtures iyakhawuleza kwaye kulula ukuthutha kwimisebenzi eyahlukileyo. I-Snap-lock Π ukukhangela phezulu ukuze...
I-120W I-LED Yesikhashana Yomsebenzi Ukukhanya 5000K 15600Lm <Ukwakhiwa koKwakha okuKhelelekileyo > : 120W Izinto ezihamba phambili zokukhanya zisebenza ngokukhawuleza kwaye kulula ukuthutha kwimisebenzi eyahlukileyo. I-Snap-lock Π ukukhangela...
Ixabiso lento: USD 56 - 60 / Piece/Pieces
Amandla okubonelela: 60000/month
UKUPHILA KUNYE: umxhatshazo wemozulu kunye nokuxhatshazelisa oku kuLed Work Lightodod ingasetyenziselwa kwimihlaba emininzi kakhulu. I-TRIPOD EYILUNGELEKILEYO: efikelela ngaphaya kweenyawo ezintathu, i-tripod eguquguqukayo iqinisekisa ukuba uhambo...
Ixabiso lento: USD 46 - 49 / Piece/Pieces
Umsebenzi wethu we- Tripod Umsebenzi wama- 80w 4,000 Ukukhanya kweLumen Bright, 5,000K Color Temperature. Xa udinga ukukhanya okukhawulezayo ukujonga iprojekti yakho elandelayo ikuvumela ukuba ubone ngokucacileyo iinkcukacha, ubambe i-Jobbiver...
Ixabiso lento: USD 52 - 55 / Piece/Pieces
I- Standable Light Stand isebenzisa uxhaso lwexantathu, kunye nesigxina se-anti-slip cover, i-stand is super stable kwaye iqinisekisa ukhuseleko lokukhanya. Uyilo lwe-Telescopic likuvumela ukuba ulungele ukukhanya kweLed Tripod kwindawo ephakamileyo...
Ixabiso lento: USD 62 - 65 / Piece/Pieces
Ukukhanya kwethu koMsebenzi woKhanya 150W i-18000 lumens ene 120lm / w. Lo Msebenzi wokuLungisa ukuKhanya ukhangele ukusetyenziswa kwintengiso, indawo yomsebenzi kunye nezinye izakhiwo. I-Bbier Led Umsebenzi Umsebenzi wokukhanya ukhanyiswa ukusuka...
KwiChina LED Work Light Lightodod Abaxhasi
UkuLeda Umsebenzi wokuKhanya ukhangelele kwiworkshop yasekhaya okanye kwindawo yomsebenzi. Isebenza kwimeko yangoku ye-120-volt yasemakhaya. Yima iguqule kwi-2 feet ukuya kwi-6 ukuphakama. Umgcini wocingo lokhuseleko, insimbi ehleliyo kunye ne-powder coat finish, kunye nombala ophuzi ukwenzela ukhuseleko.
Bbier ifakwe I-LED yoHlelo lokuKhanya lokuSebenza nge-2 LED izibane. ILampu yomsebenzi ilingana nokuphuma kwi-2 halogen bulbs. I-Watt eyi-150 Watt Equivalent Led Bulb ibonisa ukukhanya okungapheliyo, kodwa okomeleleyo kwesimbi. Ungalungisa ukuma kwindawo ephakamileyo oyifunayo. Zonke ezi zinto zibonelela ngeLed Work Light Lightod ngexesha lokuphila kwamahora angama-50,000. LED Work Light Lightodod inikeza ukukhanya okuninzi kunye ne-bulb yayo ehlala njalo. Xa sele ikhutshwe kwi-tripod, ukuphathwa kwayo kulula ukuyivumela ukuba ithunyelwe ngokulula.
Ulungelelanisi Umsebenzi wokuKhanya oKhanya 150 Watt Equivalent Led Bulb Lampu lo msebenzi Led Work Light Ukukhanyisa Umsebenzi wokuKhanya